रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने १३ खानेकुराहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने १३ खानेकुराहरु !!
प्राकृतिले हाम्रो शरीरको आवश्यक्ता अनुसार फलहरु दिएका छन् । जुन मौसममा, शरीरलाई जस्तो पोषण तत्व आवश्यक हुन्छ । त्यही अनुसार फलहरु प्राप्त हुन्छ । त्यसैले मौसम अनुसार फल सेवन गर्नुपर्छ । फलले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ । (अनलाइनखबर बाट सभार)